Injineer Maxamad Cabaas: Waxaan ahay Musharax Duqa Degmada Bosaso-Dhegayso • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Injineer Maxamad Cabaas: Waxaan ahay Musharax Duqa Degmada Bosaso-Dhegayso
Injineer Maxamad Cabaas: Waxaan ahay Musharax Duqa Degmada Bosaso-Dhegayso
March 13, 2018 - By: Abdirahman Abdi
Injineer Maxamad Cabaas Nuur oo ah muwaadin reer Puntland ah ayaa sheegay in uu yahay Musharax u taagan xilka Duqa Degmada Bosaso, kadib wareysi gaar ah uu siisay Horseed Media.
Musharax Maxamad Cabaas Nuur ayaa sheegay in uu u qalmo qabashada xilka Duqa Degmada Bosaso kadib markii uu arkay baahiyaha ka jira Degmada.
…Wadanka waxaa ka dhoofay isagoo nidaam iyo kala dambeyn leh sanadkii 1976-dii, waxaan tagey wadamo hormar iyo nidaam ka jiro, waxaan soo laabtay sanadkii 2014-ka ayuu yiri Musharax Maxamad Cabaas Nuur.
Musharax Injineer Maxamad Cabaas Nuur ayaa sidoo kale sheegay in uu ka mid ahaa Injeeradii wax ka dhisay garoonka diyaaradaha Bosaso, sidoo kale ka mid ahaa Injeerada wax ka dhisay dekaddii macmalka ahayd ee lagu badbaadiyey doontii siday hantidii saarnayd oo xilgaasi lagu qiyaasay 8 milyan oo doolar.
Injineer Maxamad Cabaas Nuur ayaa balan qaaday haddii uu ku guuleysto xilka Duqa Degmada Bosaso in ku gudan doono 100 maalmood waxyaabaha uu balan qaado, balse haddii uu ku qaban waayo mudadaasi xilka iska casi doono.
Hoos ka dhegayso Wareysiga oo dhammeystiran.